Imeko yetekhnoloji kulwakhiwo lwedatha yendawo eLatin America -Geofumadas
Iimpawu zeteknoloji kwizibonelelo zophuhliso zendawo yaseLatin America
Meyi, 2014 Geospatial - GIS, Ezahlukeneyo
Ngaphakathi kwinkqubo-sikhokelo yeprojekthi namaziko e-PAONG yamazwe ase-Latin America e-XuUM, Colombia ne-Uruguay ayasebenza kule projekthi.
"Imeko zohlalutyo lweendlela ezintsha kuLwakhiwo lweDatha yeZakhiwo eLatin America: imiceli mngeni namathuba".
Kule meko, sikumema ukuba uthathe inxaxheba kolu phando ukongeza ekusincedeni ukuba sipapashe kwaye sisasaze kwimithombo yeendaba apho abafundi beGeofumadas bafikelele khona.
Ke isimemo esithunyelwe ngabahlobo bethu be-PAIGH.
Uluntu lwaseLatin American (amaziko oluntu, iinkampani zabucala, iingcali ezizimeleyo, iiyunivesithi kunye namaziko ophando) bayamenywa ukuba bathathe inxaxheba kuvavanyo lokusetyenziswa kweetekhnoloji kulwakhiwo lwedatha yendawo eLatin America ephuhliswe ngaphakathi kwesakhelo seprojekthi yophando «Imeko uhlalutyo lwezinto ezintsha kwiZiseko zoLwazi lweDatha eLatin America: imiceli mngeni kunye namathuba ”. Le projekthi ixhaswa yi-PAIGH-Pan American Institute of Geography kunye neMbali kwaye yenziwe yiYunivesithi yaseCuenca (e-Ecuador), iYunivesithi yase-Azuay (e-Ecuador), iYunivesithi yeRiphabhlikhi (i-Uruguay) kunye ne-Ofisi kaMeya waseBototá-IDECA (eColombia).
Olu vavanyo lujolise ekuchongeni usetyenziso eLatin America oludibanisa izakhiwo kunye neenkonzo ezisekwe kwindawo kunye neendlela ezintsha zobuchwephesha ezinje ngezixhobo eziphathwayo, iisenzi ezincamathele kwizixhobo eziphathwayo, ikhompyutha yefu kunye nolwazi lokuma ngokuzithandela. Ulwazi oluqokelelweyo luya kunceda ukuseka inqanaba lenkqubela phambili yalo mbandela kwiLatin America.
I-1- ISICWANGCISO SOKUFUNDA, ukufumanisa ukufumana izicelo esele zenziwe okanye zikwinkqubo yokuphuhliswa.
I-2- IZIBHENGEZO, ejolise ekuchongeni imigangatho kunye neenkcazo ezisetyenzisiweyo, izibonelelo zazo, ukunqongophala kunye nesidingo sophuhliso lwexesha elizayo.
I-3- INDICATORS, ejonge ekuchongeni iindlela zokuhlola nokuvavanya ukulinganisa ukusebenza kunye nempembelelo ezinayo izicelo kuluntu.
I-4- IZINTO ZOKULUNGA, ejolise ekuchongeni iinkqubo ezilungileyo kunye nezifundo ezifundwe kwinqanaba leLatin American, kuthetha ukufikelela kwiindlela ezilungileyo okanye amanyathelo avelise iziphumo ezibonakalayo nezinokulinganiswa.
I-5- UKUXELWA KOKUFAKWA KWESICWANGCISO NGOPHANDO LESITHATHU, ukufumanisa ukufumana izicelo ezivele ngamanye amaziko.
Iziphumo zolu phando ziya kupapashwa kwiingxelo zeprojekthi, iincwadana zeendaba ngalo mbandela nakumanqaku, oko ke kube negalelo ekwazisweni kwezicelo ezichaziweyo. Ukongeza, abo basebenzisana nabo ababonelela ngolwazi baya kukhankanywa ekwamkelweni kweengxelo nakumanqaku.
Ukufikelela kolu phando: Apha
Imihla emiselweyo yokufumana iimpendulo: ukusukela nge-12 kaMeyi ukuya kuJuni 7, 2014.
Enkosi kwangaphambili ngentsebenziswano yakho.
UDaniela Ballari - daniela.ballari@ucuenca.edu.ec - IYunivesithi yaseCuenca (e-Ecuador)
I-Diego Pacheco - dpachedo@uazuay.edu.ec - I-Universidad del Azuay (i-Ecuador)
IVirginia Fernández - vivi@fcien.edu.uy - IYunivesithi yaseRiphabhlikhi (Uruguay)
Luis Vilches - lvilches@catastrobogota.gov.co - USodolophu waseBogotá - IDECA (Colombia)
UJasmith Tamayo - jtamayo@catastrobogota.gov.co - USodolophu waseBogotá - IDECA (Colombia)
UDiego Randolf Perez - dperez@catastrobogota.gov.co - USodolophu waseBogotá - IDECA (Colombia)
Post edlulileyo«Ngaphambilini U-Supergeo ujoyina i-GPS PL ukubonelela izixazululo zekeykey ze-iOS
Post Next Social Maps Urban, kupapasho umdlaOkulandelayo »